I-National Intellectual Property Registry misela phezulu Us
We-cms wenziwe ukuxhasa abaninzi bethu abaxhasi kwi-rapidly siphuhlisa kwaye ngumngeni Russian uqoqosho ukususela ngo. Thina lokucebisa kunye ngamazwe abaxhasi kwi-wonke umba ishishini kwi-Russia, ngokunjalo ukuncedisa Russian abaxhasi Aseyurophu kwaye ngaphaya. I-Russian Wesizwe Intellectual Property Registry («Registry») waqala zokusebenza i-intanethi kwi-apreli (cofa apha ukuze ufikelele Registry ke iwebhusayithi kwi-Russian). I-Registry waba ukumisela isixhobo ukugcina iirekhodi ka-intellectual property amalungelo, kuqukwa, kuqala kwaye foremost, iinjongo copyright kwaye enxulumene amalungelo, ngokunjalo ebhalisiweyo iimpawu zokurhweba, patented inventions, into eluncedo models kwaye mveliso designs. I-Registry iyilelwe kuba i-iyanelisa kuthetha ka-nomngeni kunye infringements ka-exclusive amalungelo kwi-Intanethi, ngokunjalo proving umnini intellectual property amalungelo. Iqhosha umsebenzi we-Registry kufuneka yayo akunakho ngokuzenzekelayo hlola enokwenzeka copyright infringements kwi-Intanethi kwaye thumela wangaphambili yovavanyo izaziso afanelekileyo websites malunga infringements ka-exclusive amalungelo. Esi sixhobo kanjalo unako ukunceda rightsholders ukwenza zabo lentengiso zoshishino kunye monetise zabo namalungelo awodwa ombhali. I-Registry kufuneka luncedo ukuba iinkampani ukuba ingaba ezininzi iinjongo copyright kwaye enxulumene amalungelo njengoko zinjalo uninzi buthathaka kakubi ngabo okwenzeke kulo ulwazi ubugcisa. Ekubeni ebhalisiweyo kunye Registry unako kuvavanya i-ubukho be copyright okanye enxulumene amalungelo kwimeko disputes. Kanjalo, e-esweni izisombululo kwaye e-izaziso ka-copyright infringements kufuneka ukucutha iindleko ukufunyaniswa kuba rightholders. Ezi infringement esweni kuthetha ukuba kufuneka kanjalo yenza ngamazwe iinkampani kunye ebhalisiweyo iimpawu zokurhweba chaza websites ukuba sebenzisa uchazo kuthetha illegally okanye uthengise counterfeit okanye»greynetic»izinto. Nangona umnini umlawuli we-Registry ngu yokusasaza ngeenjongo zokurhweba umbutho, amagunya karhulumente, kuquka Federal Inkonzo ye-Intellectual Property (Rospatent), kufuneka kuxhaswe le unye kwaye injongo yokwenza i-Registry kwaye zisuke amahlakani ayo. Oku kuthetha ukuba rightholders unako rely kwi-wonke ubume ayikwazanga ukufumana uluhlu lweencwadi kwaye sebenzisa yayo ulwazi njengoko kufanelekile ubungqina phambi ii-arhente ezinyanzelisa umthetho okanye iinkundla kwimeko disputes.
Abo wishing ukuba bathenge amalungelo ebhalisiweyo intellectual property iinjongo unako uqhagamshelane umbhali rightholder zabo okanye ummeli ngokusebenzisa Registry. I-rightholders uza kufumana ithuba esidlangalaleni chaza imigaqo ukuba olawula ukusetyenziswa zabo intellectual property yi-wesithathu amaqela.
I-Registrys imisebenzi kufuneka positively nefuthe elizayo ye-intellectual property amalungelo abathengi
Rightholders abo sebenzisa ebhalisiweyo intellectual property kwi-Russia ingaba advised: ukusebenzisa ezicetywayo iindlela zabo esweni indlela oluzenzekelayo infringements zabo exclusive amalungelo kwi-Intanethi
Isicelo kwi-Intanethi Yakho Irhafu Refund